Cobalt Air dia manomboka amin'ny lalana Düsseldorf avy any Larnaca
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Cobalt Air dia manomboka amin'ny lalana Düsseldorf avy any Larnaca
Ny Cobalt Air an'i Siprus dia nanambara serivisy vaovao indroa isan-kerinandro nanomboka ny 3 May, mampifandray an'i Düsseldorf mivantana amin'ny tobiny lehibe any Larnaca. Ny fandaharam-potoana nomanina dia hahita ny sehatr'asa 2,813 XNUMX kilometatra miasa amin'ny Alakamisy sy Sabotsy.
“Faly izahay manampy an'i Düsseldorf amin'ny tambajotram-serivisinay tsy mitsaha-mitombo manerana an'i Eoropa sy Moyen Orient. Alemana dia tsena lehibe ho antsika, na amin'ny resaka mpandeha fialamboly na ireo manidina amin'ny asa aman-draharaha. Ity zotra ity dia mameno tsara ny serivisy misy anay any Frankfurt, izay natomboka tamin'ny taona lasa. Ny Cypriot people dia nandray haingana ny Cobalt Air ho zotram-piaramanidina tiany. Ireo mpiasa an-tsitrapo dia miasa mafy mba hanomezana tsiro kely an'i Siprosy ho an'ny vahiny mandritra ny fotoana fohy hiarahana aminay. Ka na hitsangatsangana any amin'ny orinasa na any Düsseldorf ianao, dia azo antoka fa horaisina tsara ianao. ”
Ny fandaharam-potoanan'ny sidina mankany Düsseldorf dia voatondro hanintonana ny mpandeha amin'ny raharaham-barotra sy amin'ny fialan-tsasatra (jereo eto ambany raha mila fanazavana). Cobalt Air dia hampiasa fiaramanidina A320 misy seza 12 amin'ny kilasy fandraharahana ary seza 144 amin'ny kilasy toekarena hampiasana ny zotra vaovao.
1 no maty, 22 naratra rehefa nifandona ny fiaran-dalamby roa tany afovoan'i Aostralia
Dubai dia manolotra mpitsidika iraisam-pirenena 15.8 tapitrisa iraisam-pirenena